Predict the Result & Get the Prize (Week 6) - SportsTalkSocial
Predict the Result & Get the Prize (Week 6)
This week at Special Saturday, (7) premier league matches will play. I wana make mini game. Among (7) matches, I choose (3) matches. Matches are
Game is simple, predict the result and get gift. You need to correct all (3) matches result. The first (5) person who can predict the result (which teams win) can get 1 HIVE for gift. If there is only one person true, he or she get3HIVE.
Moreover you can predict the goal results for all matches, you can get extra gift. You may get 1 HBD bonus.
So you can get 1 HIVE or3HIVE ( if you are only true person among all predictions) for win team and get 1 HBD for goals results (all matches)
Only one comment for one person.
Time limite. You need to comment before 8:30 PM (Myanmar time zone [ GMT+06:30] ) because matches are started at 8:30 PM [ GMT +06:30]
Three is only five lucky men for this week. so don't late to comment.
Gift & Prize may change on next week. I will make this mini game every week. There will come other leagues matches, Champion league and Europa league in future. So let play and enjoy.
ဒီ တပတ် Special Saturday မှာတော့ premier league ပွဲစဉ် (၇) ပွဲ ယှဥ်ပြိုင် ကစားဖို့ ရှိပါတယ်။ ကျနော့် မိတ်ဆွေတွေ အတွက် အပျော်တမ်းဂိမ်း (ခန့်မှန်း ပြိုင်ပွဲ) လေး စီစဥ်ထားပါတယ်။ ဒီပွဲစဥ် (၇) ပွဲထဲကမှ (၃) ပွဲ ရွေးထုတ်ထားပါတယ်။
ဂိမ်းက ခက်ခက်ခဲခဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပွဲစဉ် (၃) ပွဲမှ အနိုင်ရမယ့် အသင်းတွေကို ခန့်မှန်း ပေးရမှာပါ။ တပွဲထဲ မှန်လို့ မရပါဘူး။ (၃) ပွဲလုံး မှန်ရပါမယ်ဗျ။ (၃) ပွဲလုံး မှန်အောင် ခန့်မှန်း နိုင်တဲ့ ပထမဦးဆုံး (၅) ယောက်ဟာ လက်ဆောင် အဖြစ် 1 hive စီ ရပါမယ်။ အကယ်၍ အဖြေအားလုံး မှန်သူဟာ တယောက်ပဲ ရှိတယ် ဆိုရင်တော့ ထိုသူဟာ3hive ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ထက်ပိုပြီး မိတ်ဆွေဟာ ဂိုးရလဒ်တွေကိုပါ မှန်အောင် ခန့်မှန်း နိုင်မယ် ဆိုရင် 1 HBD ထပ်မံ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၃) ပွဲလုံးရဲ့ ဂိုးရလဒ်နော့်။
တဦးလျှင် တကြိမ်သာ ခန့်မှန်းခွင့် ရှိပါတယ်။
ပွဲစဉ် တွေဟာ မြန်မာစံတော်ချိန် ည (၈) နာရီခွဲမှာ စတင်မှာ ဖြစ်သဖြင့် ညနေ (၈) နာရီခွဲ နောက်ဆုံးထားပြီး မန့်ပေးရပါမယ်။ သတ်မှတ်ချိန် ကျော်လွန်မှ လာမန့်လျှင် မရပါ။
အပတ်စဥ် အလိုက် ဆုကြေးကတော့ အပြောင်းအလဲ ရှိပါမယ်။ အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
(ခုက premier league ပဲ ဆိုပေမယ့် နောက် အပတ်တွေကြရင်တော့ အခြားလိဂ်နှင့် ချန်ပီယံလိဂ်၊ ယူရိုပါလိဂ်တွေကိုလည်း အလျဥ်းသင့်သလို ဖြည့်ပေးပါ့မယ်။)
နမူနာ အနေနဲ့ ကျနော် ခန့်မှန်း ပေးထားပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲလေးကို အပတ်စဥ် လုပ်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ် ဗျ။
hive-101690 myanmar palnet neoxian archon ash proofofbrain sports ecency